कवाडी ठेक्का प्रकरण : ‘रुल अफ ल अनुसार चल्नुपर्छ` – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७७ श्रावण ४ गते आईतवार ११:०० मा प्रकाशित
पोखरा महानगरपालिका वडा नं २१का वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले महानगर कानुन अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा गैरकानुनी रुपमा केहि कार्यहरु भइरहेको जनाउँदै वडाध्यक्ष कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
ताण्डव न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘रुल अफ ल अनुसार चल्नुपर्छ । केहि काम गैरकानुनी रुपमा पनि भए । मैले त कार्यपालिका बैठकमै यि कुरा उठाउँदै आएको हो ।’
कवाडी ठेक्का करको विषयमा महानगरले कानुन अनुसार रि टेण्डर गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘यस विषयमा मेरो कुरो क्लियर कट् छ । दुई चार जनाको पछि लाएर भएन, हामी त जनातको पछि लाग्ने हो । कानुन अनुसार चल्न पर्यो नि ,’ उनले भने,‘समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएको हो । कानुनी शासनको प्रत्याभुत त दिलाउन पर्यो । सिस्टम अनुसार काम गर्न पर्यो।’
ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायतका स्रोतसाधनको ठेक्कामा पनि महानगरले उचित कदम चाल्न नसकेको उनको भनाई छ । वडाध्यक्ष आचार्यले भने ‘महानगरको भित्र रहेका घाटहरु वैज्ञानिक रुपमा अनुसन्धान पछि मात्रै ठेक्का खोल्नुपर्छ । भौगोलिक अध्ययन हुनुपर्यो । एक हजार घन.मी. भनेको ठाउँमा एक हजार भन्दा बढी पो सामान उठाएको छ कि ? अनुगमन गर्ने मान्छे खै ?’
कोभिड अपडेटः मुलुकभर थप ३ सय ५५ जना संक्रमित, ३ को मृत्यु